Iindaba - Bezzia | IBezzia
Okwenziweyo licandelo elijolise kwiyure yokugqibela ye abadumileyo, iminyhadala kunye namaqela, kunye nokuzonwabisa kunye nenkcubeko. Iya kuba nazo zonke iindaba ezinxulumene nabantu abadumileyo kunye nobomi babo babucala nakwabucala: ukuzalwa, ukutshata, ukwahlukana, umthendeleko, amaqela abucala, amabhaso eewonga, iindaba malunga nokhenketho, iimuvi, imiboniso yeencwadi okanye iminyhadala eyahlukeneyo.
Ukongeza ekubeni semgangathweni kwihlabathi elipinki, sifuna ukugubungela onke la manqaku anxulumene nayo. ulonwabo nenkcubeko, ukuze sikwazi ukubonelela uluhlu olupheleleyo lwezenkcubeko kunye nokuzonwabisa kwimisebenzi yabasetyhini.
Apha unokufumana iyure yokugqibela yobomi beemodeli, iimvumi kunye nabadlali bebhola ekhatywayo, kunye nokukhutshwa komdlalo weqonga wamva nje okanye ukukhutshwa kwealbham kaDavid Bisbal yamva nje. Ukongeza, sifuna ukubonisa imicimbi yangoku ngeyona mbono intsha, sithathe iindlela zikamabonwakude, abantu abadumileyo okanye uncwadi.
Ezona filimu zibalaseleyo zothando kwi-HBO
por USusana godoy yenzayo Iiyure ze22 .
Kuba ukuba ufuna ukuchitha impelaveki egcwele uthando, ke kufuneka uthotho lweemuvi ezinje. Ngokuba...
Iimuvi ezi-6 eziya kukhutshwa kwiithiyetha zethu kungekudala
Kwaye xa sisithi ngokulandelayo, sithetha kwiiveki ezine ezizayo. Kukho ezinye ezininzi, ngokucacileyo iifilimu ezi ...
Yintoni oza kuyibona ukuba uyayithanda 'Umdlalo weS squid'
Ukuba sele ulubonile uthotho lomzuzu, 'Umdlalo weS squid' emva koko unokufuna ukuqhubeka nokonwabela izimvo ezifanayo ...
Kule nyanga sihamba kwezi ncwadi zine zintsha ukuya kwelinye ixesha. Sikwenza oku ngababhali be ...
INetflix iyaqhubeka ukothuka ngamanye amaxesha. Kuba kuyinyani ukuba rhoqo rhoqo iqala uthotho lwezindululo ngendlela ye ...
Iirekhodi onokuthi umamele kule-Okthobha
Kule nyanga unethuba lokuva okokuqala ngqa iialbham ezintsha zegcisa elihle lamagcisa. KwiBezzia ...
Umdlalo weSkwidi: Wonke umntu uthetha ngoku!
Kuyinyani ukuba iNetflix ingasothusa ngothotho olutsha okanye iimuvi. Uninzi lwazo sele lukhona kwi-retina yethu ...
Ungcelele apho iNetflix inganiki thuba litsha: Irhoxisiwe!
por USusana godoy yenzayo Iiveki ze4 .
INetflix lelinye lamaqonga anowona mxholo. Kungenxa yokuba ihlala ivela ngeendlela ezininzi zokuqala, zombini ezivela ...
Iziphumo zendalo esingqongileyo nezoqoqosho zentaba-mlilo edubulayo
por UMaria vazquez yenzayo Iiveki ze4 .
Kudala sibonile ukuqhuma kwentaba-mlilo iCumbre Vieja iveki yonke. Kwaye ngelixa iingcali zisebenza ukucoca ...
Iifilimu zaseSpain eziza kukhutshwa ngo-Okthobha olandelayo
Kuya kubakho iifilimu ezininzi zaseSpain eziza kukhutshwa ngo-Okthobha ozayo kwiimovie zethu. Uninzi lwazo ...
I-premieres ka-Okthobha onokuyibona kwiNetflix
por USusana godoy yenzayo Inyanga e-1 .
Mhlawumbi kungenxa yokuba yenye yeqonga elihlala livelela umbulelo kwinani le-premieres enayo ...